ဘဝအသေမခံနိုင်လို့ အကုန်လုံးကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ မင်းထက် !!! - Thadin
[ April 22, 2019 ] ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ တလွဲ’မာန’နှင့် မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ “မပွင့်လင်းမှု” KNOWLEDGE
HomeCELEBRITYဘဝအသေမခံနိုင်လို့ အကုန်လုံးကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ မင်းထက် !!!
ဘဝအသေမခံနိုင်လို့ အကုန်လုံးကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ မင်းထက် !!!
September 30, 2018 kanhtoo shin CELEBRITY Comments Off on ဘဝအသေမခံနိုင်လို့ အကုန်လုံးကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ မင်းထက် !!!
ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်ဆဲဆိုခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ မင်းသား မင်းထက်က သူပြောဖို့ကျန်ခဲ့တဲ့ စကားတွေကို နောက်ဆုံးအကြိမ် ရင်ဖွင့်လာပြန်ပါတယ်။
သူဟာ သူ့ဘဝကို အကြပ်ကိုင်ချုပ်ကိုင် တက်တဲ့ မိန်းမရဲ့ လက်ထဲကို အရောက်မခံနိုင်တာကြောင့် ခုလို ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
သူထပ်မံပြီးနောက်ဆုံးအကြိမ်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သူပြောခဲ့တာတွေကတော့ ” အင်တာဗျူးမှာအချိန်ကန့်သတ်မှုရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ပရိတ်သတ်တွေသိသင့်တာတွေမပြောလိုက်ရလို့ နောက်ဆုံးအကြိမ်ရင်ဖွင့်တဲ့အနေနဲ့ပြောပြလိုပါတယ်။
ဘယ်တုန်းကမှလဲပရိတ်သတ်တွေအပေါ်မထေမဲ့မြင်ပြုတာမျိုး၊ဂရုမစိုက်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဖူးသလို အနုပညာဘက်မှာလဲ ဘဝတစ်ခုလုံးကိုနှစ်မြှပ်ပြီး အစွမ်းကုန် တာဝန်ကျေအောင်ကြိုးစားခဲ့တာအားလုံးအသိပါ။
ဘယ်တုန်းကမှလည်းမလေးမစား ရင့်ရင့်သီးသီး မထေမဲ့မြင်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကို ကျွန်တော်မပြုခဲ့ မတင်ခဲ့ပါဘူး။
အခုလတ်တလောကိစ္စမှာကျွန်တော့်ကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်တွေဖြစ်သွားကြရတာကိုလည်း နင့်နင့်နဲနဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ”
” ပရိသတ်တွေကိုလေးစားတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော် တော်တော်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေ ရဲ့ပြစ်တင်ပြောဆိုခံရမှာကိုကြောက်ပြီး အဲဒီမိန်းမရဲ့ ခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင်မှုအောက်မှာ ဘဝအသေခံမလား။ ဖြစ်ပျက်သမျှကို မချွင်းမချန်ရိုးဖြောင့်စွာဝန်ခံပြီး လောကကိုရင်ဆိုင်မလား။
ကျွန်တော်ဝေခွဲရခက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး အမှောင်ထဲမှာဘဝအသေမခံဘဲ အလင်းထဲကို ထွက်ရပ် ရင်ဆိုင်လိုက်တာပါ။
ကျွန်တော်ပရိတ်သတ်ကို လေးစားစွာနဲ့ရိုးရိုးသားသား ဘဝခရီးကို ဆက်လျှောက်ချင်ပါတယ် ”
” ကျွန်တော့်ကိုအကွက်ဆင် ထောင်ချောက်ဆင် ယုံကြည်မှု သနားတတ်တာကိုအသုံးချပြီးနောက်ကျောဓားထိုးတဲ့မိန်းမ၊ မစားရရင်သဲနဲ့ပက်ပြီး အရှက်ခွဲတဲ့မိန်းမ(ကျွန်တော့်ဘဝရပ်တည်ချက် မိသားစုအရေး စီးပွားရေး တွေကအစလိုက်ပြီးသိက္ခာချအရှက်ခွဲပြတဲ့မိန်းမ)ကို ဘဝအဖော်အဖြစ် ….
မေတ္တာမထားနိုင်ပေမဲ့ သူပြောနေတဲ့ သူ့ရင်သွေးက ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တာစစ်မှန်တယ်ဆိုရင် ဥပဒေနဲ့အညီ ကလေးစားရိတ် ပေးသွားပါမယ်လို့ကျွန်တော် အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပြီးသားပါ။
အဲဒါကိုမှလောဘကြီးစွာ မတရားတောင်းဆိုမှုပြုခဲ့တာကိုတော့ ကျွန်တော်မလိုက်လျောနိုင်ပါဘူး။”
” ဒီလိုအဖြစ်မျိုးခံလိုက်ရတဲ့ယောကျာင်္းတွေရယ်၊ ဒီလိုအဖြစ်ကြုံကြရတဲ့မိဘတွေရယ် ကျွန်တော့်ကိုပိုပြီးနားလည်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့်မိဘသူ့ကိုလက်မခံနိုင်တာကလည်း တစ်ယောက်ထဲ ည2နာရီ ကက ငှားပြီး အိမ်ရှေ့လာ ကျွန်တော့်ကိုဆင်းတွေ့ဖို့အကြပ်ကိုင်တာတွေ၊ အရက်မသောက်တတ်တဲ့ကျွန်တော့်ကို ပြဿနာရှာ အားနာမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူ ပြဿနာမဖြစ်ချင်တာကို အားနဲချက်ကိုယူပြီး …
အရက်အတင်းတိုက်တာတွေ၊ ညည့်နက်သန်းခေါင် ည12/1နာရီ တစ်ယောက်ထဲသွားလာနေတာ(ကျွန်တော့်မိဘတွေမျက်မြင်မို့သူမငြင်းနိုင်ခဲ့ဘူး)တွေကိုအဓိကလက်မခံနိုင်တာကြောင့် သူ့ကိုခါးခါးသီးသီးဖြစ်လာကြခဲ့တာပါ။
ဇာတ်လမ်းရှည်ရိုက်ကွင်းမှာလည်းသတင်းတွေကို ကျွန်တော့်မိဘနားထဲအကုန်ကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲပါပါတယ် ”
” ကျွန်တော့်ကျေးဇူးရှင်တွေ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပါတနာတွေ၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ကျွန်တော့်ဘဝကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးမဲ့သူတွေ တော်တော်များများနဲ့လဲသူဝင် ခြယ်လှယ်မှု၊ရန်လိုမှုတွေကြောင့် မိတ်ပျက်ရပြီး ကျွန်တော့်ဘဝတက်လမ်းတွေ အိပ်မက်တွေ အနာဂတ်တွေ သူ့လက်ထဲမှာ တစ်စတစ်စပျက်စီးလာခဲ့ရတယ်။
အဲဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်သူ့ကိုစိတ်ပျက်လာပြီး အကြိမ်ကြိမ်ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျောက်ကြ ဖို့ပြောတိုင်း ကျွန်တော့်ကိုအရှက်ခွဲမယ်။
ကျွန်တော့်အသိုင်းအဝိုင်းမိဘတွေကိုပြသနာလာရှာမယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကိုအကြပ်ကိုင်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော် သူ့ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ဘူး။
နောက်ဆုံးမှာ အမြဲ အကြပ်ကိုင် ခံရတဲ့ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် နာကျင်မွန်းကြပ်လာလို့ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ရင်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဘဲကျွန်တော်လမ်းခွဲတော့မယ်ဆိုတာကိုသူရိပ်မိပြီး အယုံသွင်း ထောင်ချောက်ဆင် ခဲ့တာပါ ”
” အခုကျွန်တော် ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး လောကကြီးကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူခြိမ်းခြောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော့်ကိုပက်ပက်စက်စက်အရှက်ခွဲခဲ့တယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုရော၊ကျွန်တော့်မိသားစုရဲ့သိက္ခာကိုရောရစရာမရှိ အောင် သူသိက္ခာချခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ကြိုတင်မျော်လင့်ထားပြီးသားပါ။ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်။
” ပရိတ်သတ်ရဲ့ပြစ်တင်မှုကိုလည်း ကျွန်တော်အနေနဲ့ မပတ်သက်သင့်သူနဲ့ပတ်သက်မိလို့မှားမိတဲ့အမှား၊ ကျွန်တော့်ရဲ့အပြစ် တွေအတွက်ပေးဆပ်ခြင်း လို့ ယူဆပြီး ကျေကျေနပ်နပ်ခံယူပါ့မယ်။
ရှေ့ဆက်ပြီး ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်ကို ကျွန်တော်တတ်စွမ်းတဲ့အနုပညာနဲ့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစား ပေးဆပ်ရင်း ဘဝကိုရိုးသားစွာ လျောက်လှမ်းသွားပါ့မယ်။
ကျွန်တော့်ပရိတ်သတ်တွေကျွန်တော့်အတွက်စိတ်အနောင့်အယှက်ဖြစ်ရတာတွေကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ စိတ်မကောင်းစွာအနူးအညွတ်တောင်းပန်လိုက်ပါရစေ ”
Source – minhtet’s fb
ပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျဆဲဆိုခွငျးကို ခံခဲ့ရတဲ့ မငျးသား မငျးထကျက သူပွောဖို့ကနျြခဲ့တဲ့ စကားတှကေို နောကျဆုံးအကွိမျ ရငျဖှငျ့လာပွနျပါတယျ။
သူဟာ သူ့ဘဝကို အကွပျကိုငျခြုပျကိုငျ တကျတဲ့ မိနျးမရဲ့ လကျထဲကို အရောကျမခံနိုငျတာကွောငျ့ ခုလို ရှငျးပွခဲ့တာဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။
သူထပျမံပွီးနောကျဆုံးအကွိမျရှငျးပွခဲ့တဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို အသေးစိတျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
သူပွောခဲ့တာတှကေတော့ ” အငျတာဗြူးမှာအခြိနျကနျ့သတျမှုရှိတဲ့အတှကျ ကြှနျတေျာ့ပရိတျသတျတှသေိသငျ့တာတှမေပွောလိုကျရလို့ နောကျဆုံးအကွိမျရငျဖှငျ့တဲ့အနနေဲ့ပွောပွလိုပါတယျ။
ဘယျတုနျးကမှလဲပရိတျသတျတှအေပျေါမထမေဲ့မွငျပွုတာမြိုး၊ဂရုမစိုကျတာမြိုးမလုပျခဲ့ဖူးသလို အနုပညာဘကျမှာလဲ ဘဝတဈခုလုံးကိုနှဈမွှပျပွီး အစှမျးကုနျ တာဝနျကအြေောငျကွိုးစားခဲ့တာအားလုံးအသိပါ။
ဘယျတုနျးကမှလညျးမလေးမစား ရငျ့ရငျ့သီးသီး မထမေဲ့မွငျဖွဈစတေဲ့အရာတှကေို ကြှနျတျောမပွုခဲ့ မတငျခဲ့ပါဘူး။
အခုလတျတလောကိစ်စမှာကြှနျတေျာ့ကွောငျ့စိတျအနှောငျ့အယှကျတှဖွေဈသှားကွရတာကိုလညျး နငျ့နငျ့နဲနဲစိတျမကောငျးဖွဈမိပါတယျ ”
” ပရိသတျတှကေိုလေးစားတဲ့အတှကျလညျးကြှနျတျော တျောတျောစဉျးစားခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျောခဈြတဲ့ပရိတျသတျတှေ ရဲ့ပွဈတငျပွောဆိုခံရမှာကိုကွောကျပွီး အဲဒီမိနျးမရဲ့ ခွိမျးခွောကျအကွပျကိုငျမှုအောကျမှာ ဘဝအသခေံမလား။ ဖွဈပကျြသမြှကို မခြှငျးမခနျြရိုးဖွောငျ့စှာဝနျခံပွီး လောကကိုရငျဆိုငျမလား။
ကြှနျတျောဝခှေဲရခကျခဲ့ပါတယျ။နောကျဆုံး ဆုံးဖွတျခကျြခပြွီး အမှောငျထဲမှာဘဝအသမေခံဘဲ အလငျးထဲကို ထှကျရပျ ရငျဆိုငျလိုကျတာပါ။
ကြှနျတျောပရိတျသတျကို လေးစားစှာနဲ့ရိုးရိုးသားသား ဘဝခရီးကို ဆကျလြှောကျခငျြပါတယျ ”
” ကြှနျတေျာ့ကိုအကှကျဆငျ ထောငျခြောကျဆငျ ယုံကွညျမှု သနားတတျတာကိုအသုံးခပြွီးနောကျကြောဓားထိုးတဲ့မိနျးမ၊ မစားရရငျသဲနဲ့ပကျပွီး အရှကျခှဲတဲ့မိနျးမ(ကြှနျတေျာ့ဘဝရပျတညျခကျြ မိသားစုအရေး စီးပှားရေး တှကေအစလိုကျပွီးသိက်ခာခအြရှကျခှဲပွတဲ့မိနျးမ)ကို ဘဝအဖျောအဖွဈ ….
မတ်ေတာမထားနိုငျပမေဲ့ သူပွောနတေဲ့ သူ့ရငျသှေးက ကြှနျတျောနဲ့ပတျသကျတာစဈမှနျတယျဆိုရငျ ဥပဒနေဲ့အညီ ကလေးစားရိတျ ပေးသှားပါမယျလို့ကြှနျတျော အကွိမျကွိမျပွောခဲ့ပွီးသားပါ။
အဲဒါကိုမှလောဘကွီးစှာ မတရားတောငျးဆိုမှုပွုခဲ့တာကိုတော့ ကြှနျတျောမလိုကျလြောနိုငျပါဘူး။”
” ဒီလိုအဖွဈမြိုးခံလိုကျရတဲ့ယောကြာင်ျးတှရေယျ၊ ဒီလိုအဖွဈကွုံကွရတဲ့မိဘတှရေယျ ကြှနျတေျာ့ကိုပိုပွီးနားလညျနိုငျကွပါလိမျ့မယျ။
ကြှနျတေျာ့မိဘသူ့ကိုလကျမခံနိုငျတာကလညျး တဈယောကျထဲ ည2နာရီ ကက ငှားပွီး အိမျရှလေ့ာ ကြှနျတေျာ့ကိုဆငျးတှဖေို့အကွပျကိုငျတာတှေ၊ အရကျမသောကျတတျတဲ့ကြှနျတေျာ့ကို ပွဿနာရှာ အားနာမှုကိုအခှငျ့ကောငျးယူ ပွဿနာမဖွဈခငျြတာကို အားနဲခကျြကိုယူပွီး …
အရကျအတငျးတိုကျတာတှေ၊ ညညျ့နကျသနျးခေါငျ ည12/1နာရီ တဈယောကျထဲသှားလာနတော(ကြှနျတေျာ့မိဘတှမေကျြမွငျမို့သူမငွငျးနိုငျခဲ့ဘူး)တှကေိုအဓိကလကျမခံနိုငျတာကွောငျ့ သူ့ကိုခါးခါးသီးသီးဖွဈလာကွခဲ့တာပါ။
ဇာတျလမျးရှညျရိုကျကှငျးမှာလညျးသတငျးတှကေို ကြှနျတေျာ့မိဘနားထဲအကုနျကွားထားတဲ့အတှကျကွောငျ့လဲပါပါတယျ ”
” ကြှနျတေျာ့ကြေးဇူးရှငျတှေ၊စီးပှားရေးလုပျငနျးပါတနာတှေ၊လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ၊ ကြှနျတေျာ့ဘဝကိုတိုးတကျအောငျလုပျပေးမဲ့သူတှေ တျောတျောမြားမြားနဲ့လဲသူဝငျ ခွယျလှယျမှု၊ရနျလိုမှုတှကွေောငျ့ မိတျပကျြရပွီး ကြှနျတေျာ့ဘဝတကျလမျးတှေ အိပျမကျတှေ အနာဂတျတှေ သူ့လကျထဲမှာ တဈစတဈစပကျြစီးလာခဲ့ရတယျ။
အဲဒီအခွအေနမှောကြှနျတျောသူ့ကိုစိတျပကျြလာပွီး အကွိမျကွိမျကိုယျ့လမျးကိုယျလြောကျကွ ဖို့ပွောတိုငျး ကြှနျတေျာ့ကိုအရှကျခှဲမယျ။
ကြှနျတေျာ့အသိုငျးအဝိုငျးမိဘတှကေိုပွသနာလာရှာမယျဆိုပွီး ကြှနျတေျာ့ကိုအကွပျကိုငျခွိမျးခွောကျခဲ့တဲ့အတှကျ ကြှနျတျော သူ့ကိုမလှနျဆနျနိုငျခဲ့ဘူး။
နောကျဆုံးမှာ အမွဲ အကွပျကိုငျ ခံရတဲ့ ကိုယျ့ဘဝကိုယျ နာကငျြမှနျးကွပျလာလို့ မခံနိုငျတဲ့အဆုံး ဖွဈခငျြရာဖွဈ ရငျဆိုငျတော့မယျဆိုပွီးဆုံးဖွတျတဲ့အခြိနျမှာဘဲကြှနျတျောလမျးခှဲတော့မယျဆိုတာကိုသူရိပျမိပွီး အယုံသှငျး ထောငျခြောကျဆငျ ခဲ့တာပါ ”
” အခုကြှနျတျော ယတိပွတျဆုံးဖွတျခကျြခပြွီး လောကကွီးကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရငျဆိုငျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ သူခွိမျးခွောကျခဲ့တဲ့အတိုငျး ကြှနျတေျာ့ကိုပကျပကျစကျစကျအရှကျခှဲခဲ့တယျ။
ကြှနျတေျာ့ရဲ့နာမညျတဈလုံးကိုရော၊ကြှနျတေျာ့မိသားစုရဲ့သိက်ခာကိုရောရစရာမရှိ အောငျ သူသိက်ခာခခြဲ့တယျ။
ဒါပမေဲ့ ဒီလိုဖွဈလာမယျဆိုတာ ကြှနျတျောကွိုတငျမြျောလငျ့ထားပွီးသားပါ။ကြှနျတျောကနြေပျပါတယျ။
” ပရိတျသတျရဲ့ပွဈတငျမှုကိုလညျး ကြှနျတျောအနနေဲ့ မပတျသကျသငျ့သူနဲ့ပတျသကျမိလို့မှားမိတဲ့အမှား၊ ကြှနျတေျာ့ရဲ့အပွဈ တှအေတှကျပေးဆပျခွငျး လို့ ယူဆပွီး ကကြေနြေပျနပျခံယူပါ့မယျ။
ရှဆေ့ကျပွီး ကြှနျတျောခဈြတဲ့ပရိတျသတျကို ကြှနျတျောတတျစှမျးတဲ့အနုပညာနဲ့ အစှမျးကုနျ ကွိုးစား ပေးဆပျရငျး ဘဝကိုရိုးသားစှာ လြောကျလှမျးသှားပါ့မယျ။
ကြှနျတေျာ့ပရိတျသတျတှကြှေနျတေျာ့အတှကျစိတျအနောငျ့အယှကျဖွဈရတာတှကေိုခှငျ့လှတျဖို့ စိတျမကောငျးစှာအနူးအညှတျတောငျးပနျလိုကျပါရစေ ”
ဂျပန်တွေ သိပ် လိုချင်နေကြ တဲ့ တန်ဖိုးကြီး မားတဲ့ ရခိုင်ကနေပူတောင်အကြောင်း !!!
မိန်းကလေး ငယ်ငယ်တိုင်းအတွက် အရေးကြီးလို့ ကျော်မသွားပဲ ဖတ်ကြည့်ဗျာ (သမီးရှင်တွေ သတိထားဖို့ (နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာ ပါ)) !!!
This Month : 36083
This Year : 177540
Total Users : 536564
Total views : 2427139